Kiiska Iskaashiga - Raymin Display Products Co., Ltd.
Marka dib loo eego naqshadeynta shaashadda, macaamilku ma lahayn shuruudo cad bilowgii, iyo waxa aan isaga ka haysannay waa Tilmaamaha Halbeegyada Baako ee Walmart. Macaamiilku wax fikrad ah kama qabin sida loo soo bandhigo alaabada xafladda. Waxay noo sheegeen waxa lagu soo bandhigi doono cutubkan.
Sidii aan u haysannay koox injineer ah si aad ufiican ayaan u ognahay Shuruudaha Muujinta Walmart, Waxaan si dhakhso leh u soo saarnay 3D bixin si loogu tixraaco.
Ka dib dhowr jeer oo aan hubinayay Tilmaamaha oo aan la xaqiijineyno macmiilka, waxaan ugu dambeyntii xaqiijinay cabirka, oo waxaan u dirnay macaamiisha khadka tooska ah qaabeynta farshaxanka. Macaamiilku badanaa wuxuu ubaahanyahay inuu qaato 5 maalmood oo wareeg ah si uu udhameeyo naqshadooda farshaxanka. Farshaxanku waa inuu noqdaa AI ama faylka PDF Ka dib markaan helno farshaxanka, waxaan si dhakhso ah u hubin doonnaa haddii nooc kasta oo ka mid ah ay maqan yihiin, waxaanan dib ugu soo celin doonnaa oggolaanshaha macaamilka jeegga ugu dambeeya ka hor inta aan jeesjeesin muunadda.
Ka dib markii macaamilku bixiyo farshaxanka naqshadeynta, shirkadeena waxay samaysay muunad midab u ah macaamilka si loo xaqiijiyo Maaddaama Walmart ay leedahay shuruud sare oo ku saabsan midabka, waxay bixiyeen oggolaansho midab ah si aan u raacno midabka markii aan samaynta samaynayno. Warshadu waxay ubaahantahay inay la socoto midabka sida ugu dhow uguna macquulsan midabka midabka ee la bixiyay.
Waxaan si adag u hirgelineynaa nidaamka maaraynta midabka GMI inta lagu gudajiro daabacaadda si loo hubiyo xasilloonida midabka ee geeddi-socodka daabacaadda dufcad kasta. Tani kaliya ma caawinayso midabka qayb kasta inuu si fiican ugu habboonaado, laakiin sidoo kale wuxuu xakameynayaa midabka farqiga u dhexeeya daabacaadda cusub iyo tii hore.
Daabace wanaagsan waa mashiin tayo wanaagsan oo talaabo kasta oo wax soosaarka baakada ah soo bandhigaya. Kaliya dan kama lihin daabacaadda, laakiin sidoo kale waxaan daneyneynaa haddii maaddadeedu ay ku filan tahay inay culeyska alaabta hayso. Muunad cad ayaa wax badan u shaqeyn doonta macmiilka si uu tijaabada u sameeyo. Waxaan ku siinnaa shaybaarro cadcad oo bilaash ah, muunad cad oo horay loo dalbadayna qaab dhismeedka soo socda ayaa waliba shaqeynaysay.
Kooxda wax soo saarku way hubin karaan in wax waliba sax yihiin. Waxay si dhakhso leh ku ogaan karaan haddii qaladaad halkan ka jiraan. Waxaan sidoo kale soo uruurineynaa muuqaalka si aan u hubino in wax waliba sax yihiin, ka hor inta aan loo dhiibin macaamilka.